शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्घट; नाको दृश्य हेर्नेको भिड, भिडियो भाई,रल बन्यो (भिडियो हेर्नुहोस) – Ap Nepal
शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्घट; नाको दृश्य हेर्नेको भिड, भिडियो भाई,रल बन्यो (भिडियो हेर्नुहोस)
शिशिर भण्डारीको दु;,र्घटना दृश्य समेटिएको गीत भोली हामी भेट्छौं भाईरल भएको छ । युटुबमा मात्र हैन टिकटकमा पनि शिशिरको गीतले चर्चा पायो । हालसम्म १ लाख भन्दा बढि टिकटक भिडियो बनेका छन् । शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
कुशल सञ्चारकर्मी एवम् सामाजिक अभियन्ता शिशिर भण्डारीले ‘भोली हामी भेट्छौँ’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका छन् । परदेशी जिवनको मार्मिक कथामा रहेको गीतमा सुजाता केसी र शिशिरको स्वर रहेको छ ।
शब्द संगीत अभिनय उनि आफैले गरेका हुन भने गीतमा गरिमा शर्मा, सुजाता केसी,गणेश केसी लक्ष्मण अभिकारीको अभिनय देख्न सकिन्छ । ज्ञानेद्र शर्मा हुमागाईं को छायाकंन मा रहेको गीत दिन्सन शाहले सम्पादन गरेका हुन भने सन्तोष राज बहाकको निर्देशन रहेको छ ।
समाजमा दुखी गरिब अशायको शाहाराको रुपमा अफुलाई समाजमा चिनाउन मन पराउने सञ्चारकर्मी, हास्यकलाकार एवम् गायक संगीतकार हुन् ,शिशिर भण्डारी ।
पहिलो गीत हाम्रो माया जिन्दावाद दर्शको माया साथ पाएका उनले दुइ दिनको जिन्दगीमा, फोटो फिरिममा लगाएत अपार सफलता हात पारेका उनले धेरै गीतमा अभिनय समेत गरिसकेका छन् । निकै नै दर्दनाक कथा बोकेको गीत, भोली हामी भेट्छौं,।
हेर्नुहोस तलको भिडियो
Prevझुʼ क्किएर पनि खाʼनुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खाʼनेकुरा, नत्र ज्याʼनै जान सक्छ ।
Nextअनिताको हातगोडा चल्न थालेपछि उनको उप’चार गर्ने डाक्टर पहिलोपटक मिʼडियामा (भिʼडियो सहित)
गल्ती कस्को हो ? तनहुँमा के भयो यस्तो ? पोखरा जान्छु भन्दा यस्तो हा’लत – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल श्रावण ९ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ जुलाई २४ तारीख
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33066)